Calanka.com – Kulan lagu dhameystirayay heshiiskii Galmudug iyo Ahlusunnah oo Muqdisho ka dhacay: SAWIRRO
Kulan lagu dhameystirayay heshiiskii Galmudug iyo Ahlusunnah oo Muqdisho ka dhacay: SAWIRRO
in Gudaha — By Admin —	December 6, 2017 -- 73 Views
Munaasabad lagu dhameytirayay saxiixa heshiiskii ay isku afgarteen Galmudug iyo Ahlusunna ee Jabuuti, ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyadda qaranka ee magaaladda Muqdisho.
Kulankan ayaa waxaa goob joog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Wasiirka arrimaha gudaha, Mudane Cabdi Faarax Juxa oo hishiiska ay gaaren labada dhinac qeyb ka saxiixay iyo masuuliyiin kale.
Wasiirka Warfaafinta, Mudane C/raxmaan Cumar Yariisoow ayaa wakaaladda wararka qaranka Soomaaliyeed ee SONNA u sheegay in hishiiska ay wada gaareen Galmudug iyo Ahlusunna uu ku qoran yahay in Sheekh Maxamed Shaakir uu noqonayo Wasiirka koowaad ee Galmudug, islamarkaana uu shir guddoomin doonno shirka Golaha Wasiiradda Maamulka Galmudug.
“Madaxweyne Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf), Maxamed Cabdi Shaakir, ayaa heshiiska wada saxiixday, iyadoo Wasiirka Arrimaha Gudaha uu la saxiixay, Heshiiska waxaa ku qoran in Shaakir uu noqonayo Wasiirka koowaad ee Galmudug oo uu shir guddoominayo Golaha Wasiirada Galmudug” ayuu yiri wasiir Yariisoow.
Si kastaba wajiga koowaad ee heshiisyan ayaa maalmo ka hor waxa uu ka dhacay dalka Jabuuti, waxaana xilligaasi la sheegay in lagu dhameystirayo gudaha dalka Soomaaliya.